Umgangatho weLvt, Umgangatho weSpc, Umgangatho weWpc - Iverson
Jiangyin Iverson Decoration Material Co., Ltd. yasekwa ngo-2005. Lishishini ebanzi ukudibanisa uphuhliso, imveliso kunye norhwebo.
Inkampani yethu igubungela indawo ye-16,000 yeemitha zesikwere kunye neworkshop yanamhlanje kunye nendawo yokugcina impahla ecocekileyo.
Iimveliso eziphambili zezi: iinkuni zeplastiki edityanisiweyo (WPC), ilitye edityanisiweyo ngeplastiki (i-SPC), i-homogenous sheet sheet ye-PVC kunye nezixhobo ezinxulumene noko.
IVinyl yomgangatho IVinyl iplanga i-lvt yaphantsi
Umgangatho we-PVC unemibala eyahlukeneyo, efana nokutya okuziinkozo ngamatye, ukutya okuziinkozo kumgangatho wokhuni, njl. Ibhodi nganye yeplanga ibhalwe embossed, kwaye ushicilelo kunye nokuthungwa kulungelelaniswe nokwenza ubume bokwenene bokutya okuziinkozo kunye nokubonakala. Ilungele imigangatho eyahlukeneyo kwaye isetyenziswa kumagumbi aneendlela eziphezulu, ezinje ngamagumbi okuhlala, iikhitshi, igumbi lokuhlambela, amagumbi okulala, amagumbi eendwendwe okanye ukungena kunye neepaseji ukutsala amehlo. Ingafakwa kwikhonkrithi, iithayile, ivinyl okanye ukhuni, i ...
Umgangatho weLVT Umgangatho we-3D Stickers Vinyl Plank
Umgangatho wePVC luhlobo olutsha lwezinto zokuhombisa ezisetyenziswa kakhulu kumazwe kwihlabathi liphela namhlanje. Iyaziwa kakhulu kwiimarike zaseYurophu nezaseMelika nakwimakethi yaseAsia-Pacific, kwaye ithandwa kakhulu e-China, kwaye amathemba ayo ophuhliso abanzi kakhulu. Umphezulu womgangatho wePVC unendawo ekhethekileyo yobuchwephesha egqityiweyo yokunxiba enganyangekiyo, kwaye umaleko omkhulu wokunxiba onganyangekiyo ononyango olukhethekileyo lomphezulu uqinisekisa ngokupheleleyo ukumelana nokunxiba komgangatho ...
Umgangatho we-VCP IVinyl yePlanga
Umgangatho we-SPC yimveliso yetekhnoloji kunye nobulumko. Inika umxube wamanqanaba ahlukeneyo, ukutyabeka umphezulu, ukucoceka okuphezulu okucacileyo kwe-pvc yokunxiba, inkcazo ephezulu yefilimu eshicilelweyo, isiseko se-SPC kunye nesimumu. I-SPC imele 'iplastikhi yelitye edityanisiweyo' okanye 'ilitye lokudibanisa ilitye'. Ngokuchanekileyo, ilitye lekalika, eliyinkompo engaphiliyo. Ithatha i-50-70% yomxholo womgangatho. Zonke ezinye ziyi-PVC kunye ne-stabilizer. Ewe umlinganiso umiselwe ngumphathi ngamnye wemveliso owenza ukuba ibe nkulu ...
SPC nokwadala ziqinile Core engenelele Cofa indawo ...
Umgangatho oqinileyo, sisizukulwana esitsha sokugubungela umgangatho, okusingqongileyo, okuzinzileyo kunye nokuhlala ixesha elide kuneLVT.SPC umgangatho wamkela i-PVC ephezulu kunye nomgubo wamatye wendalo ngokucofa. iqhagamshela, elinokufakwa ngokulula kwiindidi ezahlukeneyo zesiseko somgangatho njengekhonkrithi okanye i-ceramic okanye i-flooring ekhoyo njl.
Izinto ezintathu zokuqhuba zokwakha uphawu lwamatye eplastiki
Ukuphuhliswa kwemizi-mveliso yeplastiki yamatye e-China sele iqalile ukukhula ngokuthe ngcembe, kwaye indlela yokwakha inkcubeko yohlobo oluthile lweenkampani ezincinci kunye neziphakathi nazo zihamba ngesantya esinzima. Ulwakhiwo lolawulo lwebrand, ukuthengisa cha ...
Uhlaziyo olubanzi kunye nokudityaniswa kweplanga yaphansi kunokwenza ukhuphiswano kwintengiso
Okwangoku, ngokuhlaziywa okuqhubekayo kwezinto ezisemgangathweni, abantu abasenamda kwiithayile zomgangatho. Ukongeza kwimigangatho, imigangatho ye-PVC ngokuthe ngcembe iyakwazi ukuhlangabezana neemfuno zabathengi zempilo yomoya. Ukuphuculwa ngokupheleleyo kwe-PV ...
Imarike yomgangatho weplastiki inekamva eliqaqambileyo
Umgangatho weplastikhi okwangoku yindawo entsha enobuchwephesha bokukhusela indalo kwimpahla yokwakha yehlabathi. Oko kwasungulwa umgangatho weplastiki kwilizwe lethu, ibiyiminyaka emihlanu okanye emithandathu yophuhliso. Kulindeleke ukuba ezimbalwa ezilandelayo ...
IDILESI No. 6 XinYuan Road JiangYin City, kwiPhondo JiangSu, China
Ifowuni 0086 15251582621